break!!!! – Hsu Myat Moe
စာမေးပွဲရှိလို့ခဏ break ယူချင်ပါတယ် ။ assignment တွေလက်စမသတ်ရသေးတာတွေရယ်..စာတွေမလုပ်ရသေးတာတွေကြောင့် ခုတလောပျောက်နေတာပါ ။ စာတွေအများကြီးရေးချင်ပေမယ့် မအားတာကြောင့် ၂၄ နောက်ပိုင်းမှ ပြန်လာခဲ့မယ်နော် ။
Taylor Swift ရဲ့ 1989 album လေး နားထောင်ပြီးကြပြီလား ဆုမြတ်တော့ TS fan မို့လားတော့မသိဘူး သူဘာဆိုဆိုကြိုက်နေတာပါပဲ ။
တီသက်ဝေဆီမှာ သူ့စာလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်..။ သူ့နာမည်က ချယ်တဲ့ ။ ခု ချယ့်မှာ ဘလော့လေးတစ်ခုရှိတယ်..။ သူက စာရေးအရမ်းကောင်းပေမယ့် ကျောင်းနဲ့ မအားတာရယ် ခု ကလေးလေးရှိနေတဲ့အတွက်ရယ် စာရေးကျဲပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူရေးသမျှ လေးတွေက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ အားပေးလိုက်ကြပါဦး ။
စာမေးပွဲက ဒီလ ၂၄ ရက်နေ့ဆိုတော့ စာမေးပွဲပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြန်လာခဲ့မယ်နော် ။ see ya !!!
4 thoughts on “break!!!!”
Holiday from Blogging 😀 Have fun. 🙂
မောင်ချမ်းမင်း ဘလော့ကနေ တဆင့်ရောက်ခဲ့တယ် တီတင့်ဘလော့မှာ အက်ဒ်လိုက်တယ်နော်။
ရောက်တဲ့နေ့မှာ ‘ဘရိတ်’နဲ့ တိုးသွားလို့ တစ်ခြားပို့စ်တွေ ဖတ်သွားတယ် ဆုမြတ်ရေ… 😀
စာမေးပွဲတွေ assignmentတွေနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေပြီပေါ့။အသူကူစရာရှိရင်လဲ မေးလ်ပို့ထားလေ။လုပ်ပေးမယ်
@myat ky, thank you so much naw 🙂
@တီတင့်– အတ်ပေးတဲ့အတွက်ရော လာလည်တဲ့အတွက်ပါ ကျေးဇူးပါတီတင့်ရယ်..း) မှတ်တိုင်လေးတွေကိုလည်းမျှော်နေပါတယ်။
@အသူ – ကျေးဇူးနော် အသူ..ဟီးးးးးး reply ပြန်တာတော်တော်နောက်ကျသွားပြီ ။ ဆောဒီး